Tsenan’ny noely- LF Ambatobe: nampiseho ny fahaiza-manao ny mpianatra momba ny asa | NewsMada
Tsenan’ny noely- LF Ambatobe: nampiseho ny fahaiza-manao ny mpianatra momba ny asa
Tanjon’ny mpikarakara ny hetsika tsenan’ny noely tany ampiandohana ny hanangona vola ahafahana manampy ny ankizy sahirana. Amin’izao fotoana izao, mivelatra ny zavatra voasahana ka sady fanabeazana ny mpianatra ny fanomanana tsena no mampiseho ny talenta samihafa.
Efa amin’ny andiany faha-12 ny « Marché de noel » karakarain’ny mpianatra sy ny mpampianatra ao amin’ny lycée Français Tananarive, Ambatobe isan-taona. « Ny mpianatra kilasy 1ère professionnelle amin’ny lalam-piofanana fitantanana sy fandraharahana no nisahana ny fikarakarana rehetra nanomboka amin’ny fiantsoana ireo mpandray sy ny mpanohana ary ny fanomanana ny tranoheva samihafa », araka ny fanazavan’ny mpianatra iray, Eva Sam, omaly teny an-toerana. « Fampiharana ny lesona any an-dakilasy avy hatrany ny fanomanana ny tsenan’ny noely satria voasahana ao avokoa ny sehatra rehetra ary miditra amin’ny tontolon’ny asa avy hatrany ny mpianatra », hoy ny mpitantana lefitra sady mpiandraikitra misahana ny sampana momba ny asa ao amin’ny lycée, i Marc Tesniere. 30 ireo mpianatra nifampizara ny asa.
Entina hampihodinana ny maison des lycéens et des collégiens (MDLC) eo anivon’ny lycée ihany ny vola azo, hikarakarana ny fivoahana momba ny fanatanjahantena na miompana amin’ny fanabeazana ny ampahany. Ny fanampiana nomen’ny malala tanana kosa mandritra ny hetsika, omaly tontolo andro, hozaraina amin’ny ankizy sahirana ao amin’ny Graines de bitume sy ny kilonga ao anatin’ny fokontany Ambatobe.
Nomena sehatra manokana ny asa tanana vitan’ny olona manana fahasembanana ao anatin’ny tsena, naranty sy namidy ao ny vokatra avy amin’ny Talentan’ny Sembana, ny tambazotran’ny vehivavy manana fahasembanana… Azo atao fanomezana ihany koa ireo entana na akora naranty tao anatin’ny tranoheva 136. Nanohana ny hetsika ny Orange, Star CT Motors…